Android Root နည်းများ,
by deathlesspuck Galaxy Note II ကို အသုံးပြုသူတွေ မြန်မာဖောင့် ရဖို့ တစ်ခုထဲအတွက် Root ကြပါတယ်…
Step 3. ယခုပုံပါအတိုင်း Download Mode ကိုဝင်သွားတဲ့အတွက် USB ကြိုးကို ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြုတာအား ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ
Driver မသိခဲ့ရင် အထက်မှာပေးခဲ့တဲ့ Samsung USB Drivers အား Install လုပ်ပေးပါ။
အားလုံးပြီးရင်တော့ Pass! ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင် အကွက်လေး ပေါ်လာရင် အောင်မြင်ပြီးစီးပါတယ် ဖုန်းမှာကတော့ ယခုလို
Coding များ Run နေသည်ကို ဆက်လက်မြင်တွေ့ရမှာပါ ဖြစ်နိုင်ရင် ကြိုးကို မဖြုတ်ပဲ ဖုန်းပါဝါတက်လာသည် အထိစောင့်ဆိုင်းပေးပါ။
3 Comments sai pipiJanuary 21, 2013 at 4:13 PMအစ်ကိုရေ... ကျတော့ imobile istyle4(2.3.6)လေးလဲ မြန်မာစာထည့်ချင်လို့ပါဗျာ....ကျေးဇူးပြုပြီးရရင်တင်ပေးပါအုံးနော်။ ReplyDeletesai pipiJanuary 21, 2013 at 4:13 PMအစ်ကိုရေ... ကျတော့ imobile istyle4(2.3.6)လေးလဲ မြန်မာစာထည့်ချင်လို့ပါဗျာ....ကျေးဇူးပြုပြီးရရင်တင်ပေးပါအုံးနော်။ ReplyDeleteMr.ThanToeAungJanuary 23, 2013 at 9:49 PMKingroot နဲ့Root ကြည့်ပါလားReplyDeleteAdd commentLoad more...